Aaway Daacadnimadaadii? | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 31, 2011 Talaado, Nofeembar 1, 2011 Douglas Karr
Daacadnimada waxaa lagu qeexaa sida tayada daacad u noqoshada qof ama wax. Weligaa ma dareentay sida daacad ayaa laga wada hadlay, in kastoo? Waxaan ka hadlaynaa sida macaamiisha waa daacad, sidee shaqaalaha waa daacad, sidee macaamiisha waa daacad, sidee codbixiyayaasha waa daacad…
Loo shaqeeyayaashu way ka hadlaan daacadnimada shaqaalaha, laakiin markaa waxay shaqaaleeyaan dibedda, ma horumariyaan hibada u gaarka ah, ama ka sii xun - waxay shaqada ka fadhiyaan tayo daacad ah. Maxay tahay daacadnimadooda kaliya qadka hoose mise saamileyda?
Siyaasiyiinta ayaa filaya daacadnimada codbixiyaha, laakiin markaa waxaan doorannaa hoggaamiyeyaal wax ku doorta iyadoo la raacayo xisbiyada oo aan ilaaway cidda ay tahay inay matalaan Maxay tahay daacadnimadooda xisbigooda ka weyn ka dibna xubinta ka ah?
Shirkaduhu way ka hadlaan daacadnimada macaamiisha, laakiin waxay siiyaan macaamiisha cusub ee ay heleen feejignaan dheeri ah iyo heshiis ka wanaagsan kuwa jira. Waa Xagee ay daacad u ahaanshaha macaamiisha jirta? Waan jeclahay fiidiyaha Bangiga Ally taasi waxay ku eegaysaa kaftan ku saabsan helitaanka macaamiisha
Marka maxaan had iyo jeer u cabirnaa daacadnimada hoos ilaa kor?
Waxay umuuqataa markasta oo qof kamid ah hogaaminta uu ka hadlo daacadnimo, kamahadlayaan daacadnimadooda, waxay ka hadlayaan sida macaamiisha ama shaqaaluhu daacad ugu yihiin iyaga. Maxay sidaa ugu shaqeysaa? Uma maleynayo inay tahay.
Daacadnimadu aniga ayey muhiim ii tahay. Markuu qof indhaha i fiiriyo oo ay gacanta iiga qaadaan, waan ku qiimeeyaa intaas in ka badan dukumiinti kasta oo sharci ama saxiix. Markuu qof dammiin ku sii daayo, sida iibiye ama rafiiq, waxaan ku xumaadaa xumaan. Haddii ay diyaar u yihiin inay u huraan daacadnimadooda, ma jiraan wax aysan u sameyn doonin lacag. Waxaan ka bixi doonaa wadadeyda si aanan mar dambe ganacsi ula yeelan shirkad sidan oo kale ah.
oo keliya ayaa macaamiisha Waxaan filayaa rajada in ay yihiin kuwa aan maal gashanay. Ganacsiyadu badiyaa waxay yareeyaan khidmadaha ama waxay ka boodaan shirkado ay rabaan inay ganacsi la yeeshaan - kama duwanaano. Kama dhimayno wax iibsashada, laakiin inta badan waxaan si deeqsinimo leh ugu deeqnaa ilaha shirkadaha aan haysan fursado kale. Markay cagahooda ku kacaan, in kastoo, rajadaydu waxay tahay inay ku mahadin doonaan maalgashiga aan samaynay oo ay nala sii joogi doonaan. Runtu waa, ma aragno marar badan. Waxay umuuqataa daacadnimadu inay dhimatay.
Haddii macmiilku si fiican noo siiyo si aan u helno natiijooyin - annaguna ma siinno - ma fileynin daacad kasta macmiilkaas tan iyo markii aan qaban weynay dhamaadka heshiiska.
Daacadnimo dhan, waxaan u maleynayaa in isu soo baxyada siyaasadeed ee labadii sano ee la soo dhaafay ay ku saabsan yihiin daacadnimo. Waxaan u maleynayaa in dadka badankood ay si farxad leh lacag badan ugu qubaan jeebka qof taajir ah… laakiin waxaan fileynaa inay daacad noo ahaan doonaan macaamiisha ahaan. Steve Jobs ayaa tusaale adag u ahaa tan. Waxaan ka cudur daarnay xadadka faa iidada iyo waxsoosaarka ka baxsan xeebta maxaa yeelay annaga, macaamiisha, si wanaagsan ayaa loo daryeelay.
Miyaad siisaa isla daacadnimada lammaanayaashaada iyo macaamiishaada sida aad ka filanayso kuwa wax iibiya iyo shaqaalahaaga?